Nissan AD Van 2009 (#712295) ကို Thingangyun ၿမိဳ့နယ္တြင္... | CarsDB
Lot Number: #712295
-EE/MDY. 1500cc. 2wd. Auto.2009 model Air Bag နှစ်လုံးပါဝါနှစ်ပေါက် မှန်ချိုး မှန်ခေါက် မှန်ချိန် မီးချိန် AC အေးစိမ့် အင်ဂျင်အောက်ပိုင်းကောင်း လိုင်စင်ဝေး ကားအတိုက်ခိုက်ရှင်း